October 17, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on श्रीमतीका यी ५ गोप्य कुराहरु श्रीमानलाइ कहिल्यै थाहा हुदैनन
काठमाडौं । भनिन्छ, पतिपत्नीबीच कुनै पनि कुरा लु’केको हुदैन । आफूले भो’गेका ती’ता-मिठा सबै अनुभव साटासाट गर्दछन् । उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र समस्यामा भएमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मा’न्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एक अर्कालाई क’हिल्यै भ’न्दैनन् ।
त्यस्तै हरेक महिलाले आफ्नो पतिबाट लु’काएर राख्ने केही कुरा छन् ।’ काठमाडौं । भनिन्छ, पतिपत्नीबीच कुनै पनि कुरा लु’केको हुदैन । आफूले भो’गेका ती’ता-मिठा सबै अनुभव साटासाट गर्दछन् ।उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र समस्यामा भएमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मा’न्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एक अर्कालाई क’हिल्यै भ’न्दैनन् । त्यस्तै हरेक महिलाले आफ्नो पतिबाट लु’काएर राख्ने केही कुरा छन् ।के के हुन् त ती कुरा ?
१. प्रायः पुरुषले आफ्नो पहिलो प्रेमबारे पत्नीलाई भनिहान्छन् तर महिलाले आफ्नो पहिलो प्रेमबारे पतिलाई भन्दैनन् । अझैपनि पहिलो प्रेमीको कहिलेकाहीं याद आउने वा उ अझैपनि आफ्नो मुटुमा रहेको जस्ता कुरा महिलाले आफ्नो पतिसँग भु’लेर पनि गर्दैनन् ।२. महिलासँग कैयौं नीजि तथा गो’प्य कुराहरु हुन्छन् । अ’नौठो के भने त्यस्ता गो’प्य वा नीजि विषयबारे नजिकको साथीलाई भन्छन् तर पतिलाई कुनै हा’लतमा भन्दैनन् । ३. कुनैपनि विषयमा पतिपत्नीबीच एउटै मत हुदैन । आफ्नो पतिले भनेको कुरालाई मन न’परेपनि पत्नीले बाहिरीरुपमा स्विकारेका हुन्छन् ।
आफ्नो कुरालाई मनैमा लु’काएर राख्दछन् । फरक मत राख्दा झ’गडा हुने सोचेर प्रायः महिलाले यस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ ।४.महिलाले आफ्नो पतिलाई न’भन्ने अर्को विषय पनि छ । त्यो भनेको रो’ग हो । आफू के कारणले वि’रामी भएको वा कुन रो’ग ला’गेको छ भनेर पतिलाई भन्दैनन् । रो’गबारे भन्दा पतिलाई त’नाव हुने सोचेर यसलाई लु’काएर राख्ने गर्दछन् ।५. घरेलु प्रयोजनका लागि सरसामान किन्दा बचेको पैसालाई महिलाले निकै जतन गरेर राख्दछन् । यस्तो पैसालाई गोप्य तथा सुरक्षितसाथ राख्दछन् । तर पतिलाई यसबारे कहिल्यै पनि थाहा हुदैन । आवश्यक परेको बेला भने पतिलाई त्यही पैसाले सहयोग गर्दछन् ।